Realme 3 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Eder Ferreno | | Shiinaha Shiinaha, Mobiles
Waxaan maqalnay warar ku saabsan Realme 3 Pro toddobaadyo. Waa taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee noocyada Shiinaha, nooca labaad ee OPPO. Dhowr usbuuc ka hor ayaa la xaqiijiyay in soo bandhigidiisu ay ka dhici Abriil 22, sidii ay ahayd. Intaa waxaa sii dheer, toddobaadyadan waxaan mar hore awoodnay inaan ogaano qaar ka mid ah qeexitaannada taleefankan, sababo la xiriira dhowr waxyaalood oo daatay sida processor-ka aad isticmaasho.
Ugu dambeyntii, Realme 3 Pro horey ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Marka waxaan ka ognahay wax walba oo ku saabsan taleefankan casriga ah nooca Shiinaha. Taleefan laga dhex furay inta udhaxeysa heerka wax soo saaraha, taasna waxay kugu balan qaadeysaa inay kaaga tagi doonto dareen wanaagsan.
Heerka naqshadeynta, sumadda Shiinaha waxay raacdaa moodooyinka suuqa. Marka waxaan ka helnaa shaashad leh heer dhibic biyo ah. Marka lagu daro haysashada dhowr kamaradood taleefanka, sida caadada u ah khadka dhexe ee Android. Waxbadan ayaan kaaga sheegeynaa telefoonkan hoose.
1 Tilmaamaha Realme 3 Pro
Tilmaamaha Realme 3 Pro
Sumadda si fiican looma yaqaan suuqyada Yurub. Laakiin tan Realme 3 Pro waxay raadinayaan inay helaan sumcad, maxaa yeelay waxaa loo soo bandhigay inay tahay ikhtiyaar wanaagsan oo dhex dhexaadka ugu sarreeya ee Android. Qeexitaannada wanaagsan, naqshadeynta hadda jirta, marka lagu daro sharadka midabada oo leh saameyn duufaan, sidaas moodada suuqa. Dhammaan maaddooyinka inay noqdaan guul. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Screen: 6,3-inch IPS LCD oo leh HD + xal buuxa iyo saamiga 19,5: 9
GacaliyeQalabka: Snapdragon 710
Kaydinta Gudaha: 64/128 GB (oo lagu ballaarin karo micro SD)
Cámara trasera: Sony IMX519 ee 16 MP leh aperture f / 1.7 + 5 MP oo leh aperture f / 2.4
Kaameerada hore: 25 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Batariga: 4.050 Mah oo leh VOOC Flash Charge 3.0
Nidaamka hawlgalka: Android Pie oo leh midabka OS 6.0 oo ah lakab habeyn ah
Xuduudaha kala duwan: Dual SIM, Bluetooth 5.0, GPS, LTE / 4G, WiFi 802.11
kuwa kale: Akhriska Faraha, AI
Cabbirada: 156,8 x 74,2 x 8,3 mm
Peso: 172 garaam
Guud ahaan waxaan arki karnaa curiyeyaal badan oo aan ka helno taleefannada casriga ah ee qaybtaan ku jira Android-ka ku jira. Nooca Shiinaha ayaa weli ku jira isticmaalka shaashadaha ka weyn 6 inji kiiskan. Shaashad si weyn uga faa'iideysata xagga hore ee taleefanka, oo leh saamiga 90,8% sida ay horayba u xaqiijiyeen. Xogtan waxaan ka helaynaa kamaradda hore, taas oo ah 25 MP kiiskan.
Dhabarka dhabta ah ee Realme 3 Pro waxaan ku haynaa kamarad labajibbaaran, oo leh aaladda ugu weyn ee Sony. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ka helnaa aaladda sawirka faraha. Batariga ayaa ah dhinac kale oo muhiim ah oo taleefanka ah, oo leh awood dhan 4.050 Mah. Marka lagu daro processor-ka waa inuu siiyaa madax-bannaani wanaagsan. Waxay sidoo kale soo bandhigaysaa tikniyoolajiyadda degdegga ah ee OPPO, VOOC. Marka si aan ugu soo dallacno baytari daqiiqado gudahood hab fudud.
Sida caadiga ah moodooyinka kale ee sumadda Shiinaha, bilaabitaankeedu wuxuu ka bilaabmayaa suuqyada Aasiya qaarkood. Hadda, waxaa horey looga bilaabay Hindiya, Halka ay suurtagal tahay in laga iibsado Realme 3 Pro horeyba. Waqtigan xaadirka ah waxba lagama xusin bilaabitaankeeda suuqyada kale. Dhawaan waxaa hubaal ah in laga bilaabi doono suuqyada kale ee Aasiya. Laakiin ma ogin haddii sidoo kale laga bilaabi doono Yurub, in kasta oo suurtagalnimada inay dhacdo xoogaa yar tahay.
Waxaan ka helnaa seddex midab oo ah Realme 3 Pro, taas oo aad ku arki karto sawirka. Kuwani waa hillaac Purple (guduud), Nitro Blue (buluug) iyo Carbon Gray (cawl). Marka waxaad kala dooran kartaa ikhtiyaariyadaan markaad mid iibsaneyso. Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba nooc marka loo eego RAM iyo keydinta, oo qiimahoodu rasmi yahay:
Nooca leh 4/64 GB waxaa lagu bilaabay qiime dhan 13.999 rupees (qiyaastii 179 euro in la beddelo)
Nooca oo leh 6/128 GB wuxuu ku yimaadaa qiimo dhan 16.999 rupees Hindi ah (qiyaastii 218 euro sarrif ahaan)
Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa wararka suurtagalka ah ee ku saabsan bilawga caalamiga ah ee bartan-dhexdhexaad ah oo ah nooca Shiinaha. Maxaad u maleyneysaa casrigaan cusub ee laga soo qaatay astaanta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme 3 Pro: Nooca cusub ee bartamaha